Venezoelà: Mpanatontosa Sarimihetsika Mandalina An-dahatsary ny Zavamisy An-Tanàndehibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2012 16:21 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, বাংলা, Français, Filipino, Español, عربي, Ελληνικά, English
Fakàn'ny mpanatontosa sarimihetsika maro aingam-panahy i Caracas, ao anatin'ny korontana mahavalalanina. Amin'ny alalan'ny asany ireo mpanatontosa sarimihetsika ireo no manipika ny hatsaran'ny fiainana an-drenivohitra amin'ny antsipiriany izay korontana sy fifangaroana no iheveran'ny olona maro azy. Avy amin'izany ny mpanankato telo no mizara ny asany amin'ny fampiasana ny fitaovana 2.0 ahafahan'ny mpiserasera anaty sy ivelan'i Venezoelà fomba fijery isan-karazany an'i Caracas.
Avy tamin'ny aingam-panahin'ny filma fohy nataon'i Jorgen Leth “The Perfect Human” (Ny Olombelona Lavorary), mampiseho ny zoro sy sombi-toeran'i Caracas ny “La ciudad perfecta” (Ny Tanàna Lavorary). Nahazo ny loka fanome isaky ny roa taonan'i Cadiz ity filma noforonin'i Sven Methling, Ricardo Bombín, Claudio Cenedese, Ángel Antúnez, Alfredo Castillo ary José Ignacio Benitez ity.
Mifantoka amin'izany trangam-piarahamonina izany ihany no izaran'i Cylixe ny asany miompana amin'ny Tilikambon'i Davida, fanorenana (building) haolo ahitana olona maro manorina ny tranony. Niadian-kevitra sy notaterina hatry ny ela ny tantaran'io fanorenana io. I Cylixe moa milazalaza ny Tilikambo ho “Tanàna ao anaty tanàna”:
Hajiantsary avy amin'ny mpisera Flickr Nicholas Laughlin, ao natin'ny alalana Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)